Rugcadaa kooxda Juventus ah oo soo jeediyay in la iibiyo Paul Pogba si…. – Gool FM
Rugcadaa kooxda Juventus ah oo soo jeediyay in la iibiyo Paul Pogba si….
Byare July 13, 2016
(Italy) 13 Luulyo 2016. Daaficii hore ee xulka Talyaaniga iyo kooxda Juventus Gianluca Zambrotta ayaa u soo jeediyay naadigiisii hore inay iska iibiyaan Paul Pogba si lacagaha faraha badan ee uga soo baxa ay ugu soo iibsadaan xiddigo kale oo shidan.
Man United ayaa la fahasan yahay inay dooneyso in lacago rikoodh ah ku khasirto xiddiga qadka dhexe ee reer France Pogba 100-milyan oo bound.
Red Devils ayaa wada hadalo kula jirtay wakiilka Pogba Mino Raiola laakiin weli ma ay furin wada hadalada sharaakiisah Juve iyadoo Rael Madrid ay sidoo kale xiiseynayso da’yarkan.
Zambrotta ayaa ka mid ahaa xiddigaha kooxda lagu naaneyso Marwada Duqda ah markii Zinedine Zidane laga iibinayay Real Madrid lacago rikoodh ka noqday waqtigaa suuqa kala iibsiga 2001-dii 45.6-milyan oo bound.
“Waan xusuustaa markii aan u ciyaarayay Juventus Zinedine Zidane uu halkaa joogay,” Zambrotta ayaa sidaa u sheegay Goal.com.
“Waxay ka iibiyeen Real Madrid lacago rikoodh ah lacagtaana waxay ku soo iibsadeen Gianluigi Buffon, Lilian Thuram iyo Pavel Nedved.
“Sidaa darteed, xitaa haddii ay noqoto inay Juve iibiso Pogba, waxay soo iibsan karaan geesiyaal kale.”.
Sikastaba, jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa sheeganeysa in Pogba uu heshiis shaqsi ahaaneed uu usbuuciiba ku qaadanayo 208,000 oo bound la gaaray kooxda Jose Mourinho ee Juventus.
Jose Mourinho iyo tababarkiisii ugu horreeyay ee Man United.....(SAWIRRO XUL AH)
Tababarkii ugu horreyay Antonio Conte ee kooxda Chelsea...(Qeylo, Tilmaamo iyo Awaamiir)+SAWIRRO XUL AH